🥇 ▷ Intee in le'eg ayaad kubixineysaa lacagta qaaliga ah ee ku jirta YouTube Music? ✅
Intee in le’eg ayaad kubixineysaa lacagta qaaliga ah ee ku jirta YouTube Music?
YouTube Waa mid ka mid ah qaabab warbaahinno fara badan oo caan ah oo durdurinaya. Markii hore, ma lihin wax rukumasho ah oo la i siiyay, laakiin hadda waxaan haysannaa Muusig YouTubebal aan aragno intee in le’eg ayaa lagu bixinayaa iyadoo ay caymis tahay.
YouTube Music Premium waa adeegga qulqulka muusikada ka socda Google, oo ku talogashay inuu la tartamo kuwa kula tartamaya sida Spotify ama Apple Music
Wuu ka duwan yahay YouTube Premium (Shabakadda YouTube), taas oo ah nidaam diiwaan gelin bille ah oo noo oggolaanaya inaan ku raaxaysanno dhammaan waxyaabaha ku jira bixinta YouTube No ads, oo ay weheliso taxane gaar ah, iyo sidoo kale waxaa ku jira Music Premium laftiisa.
Waa run in YouTube Waxaan ka raadin karnaa dhammaan heesaha aan jeclaan lahayn inaan maqalno, ama ugu yaraan inta badan. Laakiin waxaan ku qasban nahay inaan ku dhejino fiidiyowga fiidiyaha mana ahan wax ugu fiican marka aan dhageysano iyaga oo jooga banaanka guriga, sababtoo ah tan ayaa leh adeegsi aad u sarreeya oo xogta moobaylka ah.
Sidaa darteed, wuxuu ku dhashay YouTube Music Waa adeeg ku xiran YouTube maxaa yeelay tani waa isha laga helo waxa ku jira, laakiin waxay leedahay nooca la hagaajiyay ee shabakadda Y codsiyada labada macruufka iyo Android.
Sidaan nidhaahno, adeeggan waa la bixiyaa wuxuuna leeyahay waxyaalo badan oo la mid ah kuwa kale ee heesaha heesaha wata. Kuwani waa functionally ugu weyn Waxaan helnaa markii aan bixinno khidmadda billaha ah:
Muusig Xayeysiimaha cadcad.
suurtagalnimada Abuur liistooyin
Muusig khadka tooska ah, soo dejinta nuxurka.
Soo-saarista gudaha asalka (oo shaashadku dansan yahay).
Barnaamijyada loogu talagalay Android iyo macruufka, iyo dib u habeynta nooca shabakadda.
Nidaamka talooyin iyo helitaanka heesaha.
3 nooc rukumasho iyo tijaabo bilaash ah
Gudaha ‘YouTube Music Premium’ waxaa kujira qorshayaal dhowr ah iyo suurtagalnimada in la isku dayo adeegga lacag la’aan, markasta oo tixgelin la siinayo waxay bilaabi doonaan inay lacag naga qaadaan sida ugu dhakhsaha badan waqtiga kama dambaysta ah (haddaanan horay u kansalin kahor). Kuwani waa xulashooyinka:
Maxkamad Bilaash ah: Waxay hadda socotaa 3 bilood.
Qorshaha caadiga ah: Xulashada ugu caamsan ee isticmaalaha keliya, qiimahiisuna waa € 9.99 bishii.
Qorshaha Qoyska: Illaa 5 xubnood oo qoyska ka tirsan, oo mid waliba leh koonto u gaar ah € 14.99 bishii (€ 3 bishii qofkiiba).
Qorshaha Ardayda: Haddii aad arday tahay, nasiib ayaad ku leedahay. In kasta oo ay u baahan tahay jeeg sanadle ah, waad ku raaxeysan kartaa rukummada oo leh kalabar qiimaha, taasi waa, € 4.99 bishii.
Kaliya waa inaad buuxiso foomka oo aad sugtaa oggolaansho, isla marka ay xaqiijiyaan xogta aad ku raaxeysan doonto soo-jeedinta.
Bog: Muusikada YouTube-ka ee ardayda
Waa muhiim Ha ku khaldin Muusikada YouTube-ka ah ee leh ‘Top Premium’ ee ‘YouTube’. Adeeggan ugu dambeeya waa inaan ku bixinaa wax yar ka badan (11.99 euro oo saldhig ah, 17.99 euro qorshaha qoyska iyo 6.99 euro ardayda) laakiin waxaan helnaa faa iidooyin dheeraad ah.
Marka laga reebo heesaha heesaha ‘Premium Music’, iyadoo aan bixineyno diiwaangelintan waxaan ka baabi’inaynaa dhammaan xayeysiiska ka soo baxa YouTube, waxaan soo dejisan karnaa, ka daawan karnaa khadka tooska ama gadaal muuqaal kasta oo fiidiyow ah, waxaanan u heli doonnaa asalka ah (filimada taxanaha iyo filimada gaarka ah ee madal).
Hadda oo aad ogtahay imisa ayaad bixinaysaa lacagta qaddarka YouTube Music waad is barbardhigi kartaa adeegyada sida free Prime Music (hadaad leedahay Amazon Prime) ama “kooxda” Apple Music iyo Spotify.
Waa maxay ikhtiyaarka kuugu habboon adiga? Immisaad u maleyneysaa inay macquul tahay inaad bixiso si qalabka muusikada loo keeno qalabkaaga?